Hermitage - Museum Petersburg, okuyinto kuwufanele ngokuvakashela ngamunye okungenani kanye empilweni. Udumo lakhe emhlabeni wonke. Nganoma yisiphi isikhathi unyaka kule Hermitage ugcwele izivakashi abeza North Palmyra kusuka wonke amagumbi wonke. amaqoqo Museum sika aqukethe cishe bayizigidi ezingu-3 ziphephile ezithakazelisayo, futhi ukubona bonke, Izivakashi kuyomelwe baye ku amahholo eziningi, imihubhe kanye ezitebhisini eyinkimbinkimbi Museum 20 amakhilomitha eside.
Yikuphi izakhiwo ayingxenye eziyinkimbinkimbi Museum "Hermitage"
Lapho izivakashi zifika emzini oku iNeva, bona baphupha ukuvakashela iminyuziyamu eminingi Petersburg. Hermitage kuyinto kulolu hlu, njengoba umthetho, kwasekuqaleni. Kodwa kwabaningi kuba lihlotshaniswa kuphela Winter Palace. Futhi eqinisweni, Museum esikhulu Hermitage eziyinkimbinkimbi, ngaphezu ukudalwa edume of Rastrelli, kuhlanganisa izakhiwo 5 sihle futhi esinesithunzi ahlelwe ilandelana kanye iNeva yashayisa unqenqema maphakathi Petersburg.
Lona Hermitage Small, ezakhiwe ngaphansi kokuqondisa umakhi abanamakhono Vallin de la Mothe, Hermitage Omkhulu - umakhi ekudalweni Felten; Hermitage Theatre (wezakhiwo Quarenghi) kanye okusha Hermitage wezakhiwo von Klenze. Zonke lezi zakhiwo ezinhle yezakhiwo ziye adalwe abaculi abahlukene ngezikhathi ezehlukene, kodwa manje yomkhakha owodwa - the Hermitage, Museum and isikhungo kwamasiko.
Mayelana Museum Hermitage art mlando zithi lokhu: bahlolisise zonke ziphephile zayo, kudingeka okungenani engu 9 ubudala, futhi omunye acabanga ukuthi ngisho lokhu umnqamulajuqu ngeke ngokwanele, iqoqo elikhulu kangaka amagugu amasiko egcinwe ebusika kanye nezinye izindlu zamakhosi eyinkimbinkimbi. Konke kwaqala ngo-1764. Yingaleso sikhathi lapho uCatherine II wayala ukuthenga indali amazwe imisebenzi ebaluleke kunayo art ukuze uwafake ikamelo we Hermitage Amancane.
Ngemva kwalokho, lapho iqoqo yandile kakhulu, futhi indawo Palace Small kwakunganele, imisebenzi eziyigugu yobuciko waqala ibekwe kwamanye izakhiwo. Ngakho, kancane kancane ngenza wadala Hermitage - Museum, okuyinto sonke siyazi. Yonke indawo, emhlabeni wonke wathenga imidwebo esiyigugu, izinto eziqoshwe ngamathambo ezindlovu yezicathulo, imidwebo, ukuqoqwa zemali lasendulo, izindondo, izincwadi, ama-value lasendulo nezinto zobuciko zokuhlobisa. Ngemva kokufa uCatherine II, u-Alexander ngaya ukuqoqa izinto ezenziwe ngesandla ezithakazelisayo kakhulu.
Kuze maphakathi nekhulu XVIII. ilungelo lokubona embukisweni Hermitage kwaba ezicukuthwaneni etholakalayo akhethwe kuphela. Futhi eminyakeni eyalandela umnyango amahholo Museum iye kungagcini kwamanye amakilasi. Ngemva 1917 Revolution, i Hermitage kanye nokuqoqwa yayo ocebile yobuciko zomlando eziligugu baye zitholakale abantu abavamile.
AmaHholo Museum kanye nokuqoqwa
Namuhla, i-Hermitage - Museum lapho eziningi amakamelo abelwe amaqoqo ethize thematic. Kukhona Division Western Europe, uMnyango Okwezwe Basendulo East, isiko zazingavumi kahle futhi bengenalo Numismatics, iqoqo elikhulu eGibhithe lasendulo, "Igumbi Gold", kanye uMnyango olubanzi Umlando Russian Namasiko.
Ingxenye ngayinye Museum uthola kuqala endaweni yokwamukela izivakashi, lapho ungase ukwazi ukuya esitezi sesibili, kuze ezinhle Jordan enezitezi. Khona-ke isivakashi singena ehholo elikhulu the Hermitage (1103 sq. M.). Ibanga kanye iNeva yashayisa unqenqema futhi siqukethe amakamelo amathathu. Kulandele Concert, Field Marshal, Peter Hall. A sobukhosi esikhulu, futhi eSt George sika Hall, ehlotshiswe sobukhosi, 28 zekristalu futhi 48 nezinsika zemabula. Kukhona Alexandrovsky, Malachite kanye White Hall, Golden Ukuphila nokuningi. D.
Iqoqo ubuciko Hermitage
ukunakekela okukhethekile lokunikelwa ibuthelelo kwamasiko isikhungo wobuciko kanye zomlando yenhloko-dolobha enyakatho. Namuhla, isakhiwo yangaphambili ababusi Russian eyaziwa emhlabeni wonke njengoba art Museum enkulu kunayo yonke eYurophu. Hermitage ine iqoqo olunzulu emidwebo abaculi abadumile kakhulu. Lapha ungakwazi ukubona zabalingiswa abadwebi like uLeonardo da Vinci, Michelangelo, uRaphael, Rembrandt, Rubens, Van Deyk, Poussin, Watteau, Tiepolo, Rodin, Renoir, Monet, Cezanne, Van Gogh, Picasso, Matisse nabanye. Abadali Ehlakaniphile.
Ehholo imidwebo Western Europe kukhona yobuciko esingenantengo ezifana "Madonna futhi Ingane" ( "Madonna Litta") kanye "Madonna benua" zaveza by da Vinci, enhle encane Umdwebo okusaqanda ngo-Raphael "Madonna Konnestabele". Ngaphansi zabalingiswa Rubens kwadingeka lengqondo igumbi eligcwele, lapho ungakwazi ukubheka mdwebo "Venus futhi Adonis", "i-Portrait of a maid of Infanta", "The Union of Earth Water" Yalusani yesehlakalo "," Bacchus "," yehla kusuka Cross ", kanye eminye imisebenzi genius Fleming.
Laphaya Hermitage futhi Rembrandt Hall. Lapha, kanye nezinye imidwebo yakhe, iyona edume "Danae", okusho ivikelwe ingilazi armored ukuvimbela Ukuphinda zokugqekeza nokucekela phansi impahla. Le Umdwebo bekulimele ngo-1985 omunye izivakashi, futhi phezu ifake isandla ekubuyiselweni kwalo kanye nokubuyiselwa ezingamaKristu kwakudingeka zisebenzele iminyaka eminingi. Izivakashi nazo ziyatholakala ngokuvakashela amahholo Michelangelo, imidwebo Dutch, majolica nabanye abaningi.
Imininingwane omfushane ebhalwe kuloluGunyazo, ngale sihloko Yiqiniso, ngeke bakwazi ukusho ukuthi ngazo zonke ziphephile. Udinga uvakashele Hermitage. Museum livulekele emphakathini nsuku lweviki ngaphandle ngeMisombuluko. Main Museum Inxanxathela sise Palace Square, 2. ehlobo futhi ngezimpelasonto, ukuze singathwesi bame emigqeni, ukusebenza isikhathi eside, kungcono sifike isikhathi esiyihora nengxenye ngaphambi kokuvula, ebanjwa at 10,30.
Ukufinyelela Hermitage akukho nobunzima, ngoba lokhu eziyinkimbinkimbi Museum itholakala enkabeni yedolobha. Esiteshini esiseduze metro - "Admiralty". Kufanele baphume, indlela ngokushesha ujike kwesokunxele uhambe nje amamitha ambalwa kusuka emgwaqweni. Malaya Morskaya. Khona-ke jikela ngakwesokudla uhambe ukuze saseNevsky Prospekt. Manje, kwesokudla saseNevsky ukufika kuwo Palace Square - emnyango Hermitage itholakala khona.
Ngaphezu kwalokho, ebesingakutusa nakanjani vakashela State Russian Museum, iKhabhinethi of Curiosities, eziningi zamakhosi suburban komuzi (Pavlovsk, ePeterhof, njll ...) - zonke owaziwa iminyuziyamu yeRussia. Hermitage phakathi kwabo, yebo, luhlala ebaluleke kakhulu nabathandwayo, hhayi kuphela abantu baseRussia, kodwa futhi ngoba izivakashi zakwamanye amazwe.
Spartak metro station izovula 2014
Mark Avrely: A Biography futhi ukucabanga